admin – Page 14 – Global News Myanmar
သွားဖုံးရောင် ရောဂါ ရေစီးကမ်းပြို အတွက်ဆေးနည်း နှင့် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များ
ဒီရောဂါဟာ အင်မတန်ခံစားရခက်ပြီးခံစားရလည်းမသက်သာပါဘူး။တိုင်းရင်းဆေးနည်းနဲ့ကုသနိုင်ကြဖို့ဆေးနည်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ကုသနည်း(ယခုကုသနည်းအားလုံးလုပ်ပေးပါ) (၁) အုန်းဆီစစ်စစ်နဲ့သွားဖုံးကိုလိမ်းပြီးလက်ဖျားနဲ့ သွားဖုံးကိုနှိပ်ပေးပါ။(၂) နေ့လည်ထမင်းစားပြီး ပန်းသီးအစိမ်းကိုကိုက်စားပေးပါ။ (၃) မန်ကျည်းသီးမှည့်ကိုအနေတော်လောက်ယူ၍ညထဲကရေတစ်ခွက်ထည်းဆားထည့်ပြီးစိမ်ထားပေးပါ။ မနက်နိုးနိုးချင်း ယင်းဆေးရည်ကိုသောက်ပေးပါ။ဝမ်းပျော့ပျော့တစ်ကြိမ်သွားပါမယ်။ဝမ်းတွင်းကအပူထွက်ခြင်းအပုပ်များကင်းစင်ခြင်းကြောင့်သွားဖုံးရောင်တာသက်သာပါလိမ့်မယ်။ အမြန်သက်သာစေနည်း တမာခေါက် မာလကာခေါက် ဆီးခေါက်မန်ကျည်းခေါက် ရရာတစ်ခုခုကိုပြုတ်ပြီးခပ်နွေးနွေးဖြစ်ပါက ယင်းဆေးရည်ကိုငုံပြီး ပလုပ်ကျင်းပေးပါ။ ဓါတ်စာ(လိုက်နာစားသုံးရန်) အခါးပါသောအစာများ ဖန်ခါးသီး ဆီးဖြူသီး ကြက်ဟင်းခါးခွေးတောက်ရွက် ကင်းပုံသီး ငါးကြင်း နဲ့အရိုးပါစားရသော ငါးကလေးများ။ ရှောင်ရန်အစားအစာများ ကြပ်ကင်ထားသော …
အသည်းအဆီဖုံးတာကို ၁၀ ရက်အတွင်းပျောက်ခဲ့သူ၏ကိုယ်တွေ့ဆေးနည်း
ယခုတလော အဖြစ်များနေသော ရောဂါမှာ အသည်းအဆီဖုံးရောဂါ ဖြစ်သည်။ နေ့စဉ် စားသောက်နေသော အစားအသောက်များက အဆီအဆိမ့်များခြင်း၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု နည်းခြင်း၊အအိပ်အနေ လွန်ကဲခြင်း တို့ကြောင့် အ သ ည်း အဆီဖုံးရောဂါ ဖြစ်ရသည်။အများအားဖြင့် အဝလွန်သူ၊ လမ်းလျှောက်နည်းသူ၊ ဇိမ်ခံလွန်းသူ လူတန်းစားတို့ အဖြစ်များ၏။တစ်နေ့တွင် စာရေးသူ၏ ဆေးဆိုင်သို့ အသည်းအားဆေး Livolin (လစ်ဗိုလင်) လာ ရောက် …
ဆီးလမ်းကြောင်းကျောက်တည်တာကို ယူပစ်သလိုပျောက်တဲ့ ဟင်းနုနွယ်ဆူးပေါက်
မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ ကျောက်ကပ်ကျောက်တည်သူများ ဆီးလမ်းကြောင်းကျောက်တည်သူများအတွက် ဟင်းနုနွယ်ဆူးပေါက် အကြောင်းလေး ပြန်လည်မျှဝေချင်ပါတယ်။ ဟဓါတ်ပုံမှာပါတဲ့ဆေးပင်ကလေးဟာ လမ်းဘေးသို့မဟုတ် ကွင်းပြင်တွေမှာပေါက်ရောက်တတ်ပါတယ်။အဲဒီအပင်လေးကိုဟင်းနုနွယ်ဆူးပေါက်လို့ဆေးပညာ စသင်ပေးခဲ့တဲ့အဖိုးကပြောပြပါတယ်။ သည်အပင်လေးဟာ ဟင်းနုနွယ်မျိုးနွယ်ပါပဲ ဒါပေမဲ့သူရဲ့ထူးခြားချက်ကဆူးကလေးတွေပါနေတာပါ။ကျနော့ကိုဆေးပညာသင်ပေးခဲ့တဲ့ကျနော့အမေရဲ့အဖေကျနော့အဖိုးဟာ ဆီးပူဆီးအောင့်ဆီးသွေးပါ ဆီးကျောက်တည်တဲ့လူနာတွေတွေ့တိုင်း သည်ဟင်းနုနွယ်ဆူးပေါက်ပင်တစ်ပင်လုံးကို ရေနဲ့သန့်စင်အောင်ဆေးပြီးဓါးနဲ့နုတ်နုတ်စင်းကာရေကိုရေဖလားတစ်ခွက်ခန့် ထည့်ပြီးအိုးတစ်လုံးနဲ့ကျိုပါတယ်။ဆေးပြုတ်ရည်အဖြစ်ဖန်တီးလိုက်တာပါ။ပြုတ်ရည်ရပြီဆိုရင်အအေးခံပြီး ပြုတ်ရည်မှာသကြားခပ်ကာ လူနာကိုသောက်နိုင်သလောက်နည်းနည်းချင်းစတိုက်ပါတယ်။ နေ့တိုင်းလည်း ဟင်းနုနွယ်ဆူးပေါက်အပင်သစ်နဲ့ကြိုသောက်ခိုင်းပါတယ်။ထိုအခါလူနာမှာကျောက်ကြောင့်အောင့်ခြင်း ကိုက်ခြင်းနာခြင်းများသက်သာ၍ကျောက်များထွက် ကျလာပါတော့သည်။ ကျောက်သေးရင်တော့ အမှုန့်ဖြစ်ကာပျော်ကျစေပါတယ်။ဆီးအိမ်ကျောက်ကပ်ဘယ်နေရာမှာပဲကျောက်ရှိရှိ သည်ဆေးပင်လေးကပျောက်ကင်းအောင်အစွမ်းထက်ကုသနိုင်ပါကြောင်း အဖိုးပေးခဲ့သောဆေးနည်းအားစေတနာဖြင့်လက်ဆင့်ကမ်းပါသည်။ zawgyi …
နှလုံးသွေးကြောကျယ်သူတွေအတွက် နတ်ဆေးလိုစွမ်းတဲ့ စကားစိမ်း
အပွင့်ကစ တစ်ပင်လုံးအစိမ်း ရောင်ရှိတဲ့ ပင်စောက်မျိုးပါ – စကားဖြူ. စကားဝါတို့နဲ့ မျိုးရင်းချင်း မတူပါ. ပွင့်ဖူးစကတည်း ကအပွင့်အဂါၤများစုံလင်ပေမယ့် မမွှေးပါ ။ တဖြည်းဖြည်း ရင့်လာပြီး ပွင့်ဖတ်ကလေးတွေ ဝါဖန့်ဖန့် ဖြစ်လာရင်တော့ ပြင်းရှတဲ့ရနံ့နဲ့ ကလူ မြူပါတော့တယ် ။ဒါပေမယ့် ပန်းကလေးရဲ့ ကံခေချက်က အိမ်တွင်းနတ်မောင်နှမနဲ့ အထုံပါ လာတော့နတ်ယုံသူ အများစုကပန် ကြဖို့ နေနေသာသာ …
တန်ဖိုးကြီး အင်္ဂလိပ်ဆေးတွေ ဝယ်ပြီး အမြဲမမှီဝဲနိုင်သူတွေ အတွက်ပါ။ ခရေပင်က ခရေရွက် လက်တစ်ဆုပ်ပြုပ် ။ နံနက်စာစားပြီး ရေနွေးကြမ်း တစ္ခြက္စာ ။ ညနေစာစားပြီး တစ်ခွက်သောက်ရင် ဆီးချိုကို ထိန်းနိုင်တယ် ပြောပါတယ်။ ကုသိုလ်တော်ဘုရားဝင်းမှာ ဝေယျာဝစ္စလုပ်နေတဲ့ အဘတစ်ဦးမှ ာခြေမခလုတ်တိုက်မိရာက အနာမကျက်နိုင်ပဲ ခြေတရွတ်ဆွဲ သွားနေတာ။ ဘုရားလာနေကျ ဆရာဝန်ကြီးတစ်ဦးက ဆေးခန်းခေါ်စစ်ဆေးပေးရာ ဆီးချိုအဆင့်၁၂အထိ တက်နေတယ် …
ပွေးတွေကို သင်္ဘောမဲဇလီနဲ့ နာနာပွတ်ပေးလိုက်ပါ
ပျောက်သွားလိမ့်မယ်” ဦးလေးပြောသံကို ကြားယောင်မိသည်။ ပွေး၊ ဝဲကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်ကြောင်း ပွေးသတ်ဆေးပင်ဟု လူသိများသည်။ ဝမ်းပျော့ပျော့သွားစေရန် အရွက်၊ အဖူး၊ အပွင့် မီးကင်၍ တို့စားကြသည်။ အခြောက်လှန်း၍ လက်ဖက်ခြော်အဖြစ် သောက်ကြသည်။ သင်္ဘောမဲဇလီနှင် ပတ်သတ်၍ ပြောမဆုံးပေါင် တောင်သုံးတောင်ဟု ဆိုရမတတ် ရေးစရာများလှပေသည်။ သင်္ဘောမဲဇလီကို မဲဇလီကြီးဟုလည်းခေါ်သည်။ ပင်လတ်မျိုးဖြစ်သည်။ ပင်စည်စိမ်း၍ ချောမွေ့သည်။ အကိုင်းအသင့်အတင့် များသည်။ …
ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းမှ ရင်သားကင်ဆာကို ဟန့်တားနိုင်
ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း (Broccoli) မှာ ပါဝင်တဲ့ ဒြပ်ပေါင်းတစ်မျိုးဟာ ကင်ဆာကျိတ်တွေ ကြီးထွားမှုကိုဖြစ်စေတဲ့ အဓိကဆဲလ်တွေကို ဟန့်တားနိုင်ကြောင်း အမေရိကန် သုတေသီတွေက တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကင်ဆာစတမ်းဆဲလ်တွေ (Cancer Stemcells) ဟာ အရေအတွက်နည်းပေမယ့် ကင်ဆာပြန်ဖြစ်တာနဲ့ ပျံ့နှံ့တာအတွက် အဓိကသော့ချက် ဖြစ်ပါတယ်။ မီချီဂန် တက္ကသိုလ်မှ သုတေသီတွေက ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းမှာပါတဲ့ Sulforaphane လို့ခေါ်တဲ့ ဒြပ်ပေါင်းဟာ ကင်ဆာကျိတ်အသစ်တွေ ဖြစ်ပေါ်မှုကို …
အသည်း နဲ့ ကျောက်ကပ် အတွက် ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း အကျိူးများတဲ့ သင်္ဘောစေ့
သဘောင်္သီးကို စားတဲ့အခါမှာ အစေ့ကိုအမြဲတမ်း လွှင့်ပစ်လေ့ရှိပါတယ်။ သင်္ဘောစေ့ရဲ့ အကျိုး ကျေးဇူးတွေကို သိပြီးရင်တော့ လွှင့်ပစ်တော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ တွေးမိပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သင်္ဘောစေ့မှာ ရောဂါပေါင်းများစွာကို ကုသပေးနိုင်တဲ့ ဂုဏ်သတ္တိတွေပါဝင်နေလို့ပါပဲ။သင်္ဘောစေ့ရဲ့ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူး – ၁။ ကင်ဆာ – သင်္ဘောစေ့ဟာ ကင်ဆာ တိုက်ဖျက်ရေး အတွက် အထူးကောင်မွန်တဲ့ ဆေးတစ်လက်ပါပဲ။ ကင်ဆာဆဲလ်တွေ ကြီးထွားမှုကို …
လေထိုး၊လေအောင့်၊လေတက်ခြင်းကို သက်သာစေနိုင်တဲ့ အပြုတ်ရည်များ
ဗိုက်ထဲမှာ လေတွေပွပြီး လေတွေတက်နေတဲ့အတွက် လူကြားသူကြားထဲ အဆင်မပြေတဲ့အခါ မျိုးရှိကြပါတယ်။ တစ်ခါ လေကထိုးလို့ ဗိုက်ကနာရတာနဲ့ ဗိုက်ပြဿနာဟာလည်း လူကို နေရခက်စေပါတယ်။ ဒီလိုဗိုက်ထဲ လေထိုးတာတွေ၊ လေတက်တာတွေကို သက်သာသွားစေတဲ့ အပြုတ်ရည်တွေရှိပါတယ်။ကိုယ့်အိမ်မှာ ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်သောက်လို့ရပြီး ဒီလိုလေထိုး၊လေအောင့်၊လေတက်တွေကို အများကြီးသက်သာစေနိုင်တာပင်ဖြစ်ပါတယ် (၁)စမုန်နက်အစေ့ပြုတ်ရည် စမုန်နက်အစေ့ပြုတ်ရည်ဟာ ဗိုက်နာတာတွေ၊ အစာမကြေလေအောင့်လေနာဖြစ်တာတွေ၊ ဝမ်းလျောတာတွေ၊ လေပွတာတွေကို သက်သာစေတယ်လို့ ထောက်ခံပေးထားကြပါတယ်။ စမုန်နက်ရဲ့တကယ့်အစွမ်းက သူ့ကို …
ကြွက်တက်လို့ ကြွက်သားနာခြင်း၊ကိုယ်တွင်းကအရိုးနာ၊ အရွတ်နာခြင်းတို့အတွက်
ကိုယ်တွင်းကအရိုးနာ၊ အရွတ်နာ၊ ကြွက်သားနာ တာတွေကို ဆားမီးလှော်အပူလေးနဲ့ကြပ်ပူထိုးရင်ပျောက်ပါတယ် ဆားလက်တဆုတ်ကိုအိုးထဲထည့်လှော်ပါ အငွေ့ထွက်ပြီးပူလာရင် အဝတ်လေးထဲထည့်ထုပ်ပါ ပြီးရင်နာတဲ့နေရာကိုဖိဖိတို့ပေးပါ သက်သာရာကနေ ပျောက်ကင်းမှာပါ ၃-၄ ရက်တော့ဇွဲထားလုပ်ပေးပါ zawgyi ကိုယ္တြင္းကအရိုးနာ၊ အ႐ြတ္နာ၊ ႂကြက္သားနာ တာေတြကို ဆားမီးေလွာ္အပူေလးနဲ႕ၾကပ္ပူထိုးရင္ေပ်ာက္ပါတယ္ ဆားလက္တဆုတ္ကိုအိုးထဲထည့္ေလွာ္ပါ အေငြ႕ထြက္ၿပီးပူလာရင္ အဝတ္ေလးထဲထည့္ထုပ္ပါ ၿပီးရင္နာတဲ့ေနရာကိုဖိဖိတို႔ေပးပါ သက္သာရာကေန ေပ်ာက္ကင္းမွာပါ ၃-၄ ရက္ေတာ့ဇြဲထားလုပ္ေပးပါ zawgyi